Xiaomi MIUI 8 Gapps Installer (31.3) MB - MPPG
Home / Uncategorised / Xiaomi MIUI 8 Gapps Installer (31.3) MB
minokekar August 6, 2016	Uncategorised 3,026 Views
Xiaomi ဖုန်းတွေအတွက် မနေ့တနေ့ကမှ အသစ်ထွက်လာတဲ့
MIUI 8 အတွက် Google Application သွင်းလို့ ရနုိုင်မယ့်
apk လေးတွေပါ ကွန်ပျူတာမလိုပါဘူး. ဖုန်းမှာ internet လေးပဲ
ဖွင့်ထားပေးပါ. ကျနော် MIUI 8 မှာ စမ်းထားပီးပါပီ. အဆင်ပြေပါတယ်.
Download MIUI 8 Gapps installer (31) MB
Rarr Pass ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း – minoaker ပါ
Previous Rooting Samsung Galaxy S5 (SM-G900H)& Stopped on Logo Fix 100% Tested
Next Twrp recovery for samsung galaxy note7all exynos model:N930F / S / L / K / W8